Maso Egyptianina - Mason'ny Tatoazy Horus sy ny dikany | Ny fanaovana tatoazy
Susana godoy | | Tatoazy ara-pinoana
Raha tianao ny sary famantarana amin'ny tatoazy, dia ho tianao ny maso egyptiana na antsoina koa hoe maso horus. Amin'ny ankapobeny, ny tatoazy egyptiana rehetra dia manaitra ny ampahany amin'ny zavatra inoanay foana. Mazava ho azy fa manana toetra an'ohatra lehibe izy ireo izay maneho ny kolontsaina niainany tamin'ny fomba mahery vaika.
Amin'ny alàlan'ny famolavolana, marika ary tarehimarika dia afaka manakaiky kely kokoa ny zavatra tian'ireo Egyptianina ampitaina amintsika isika. Androany dia hataontsika amin'ny alàlan'ny maso ejipsianina na Horus, araka ny efa fantatra. Izy io dia iray amin'ireo malaza indrindra sy manintona indrindra, angamba satria zavatra malina izy io ary afaka mizatra amin'ny zava-drehetra isika karazana endrika.
1 Inona no dikan'ny maso ejipsiana na ny mason'i Horus?
2 Tandindon'ny maso ejiptiana
3 Angano momba ny maso ejiptiana
4 Volavola Eye of Horus
Inona no dikan'ny maso ejipsiana na ny mason'i Horus?
Amin'ny ankapobeny, afaka milaza isika fa ny mason'ny egyptiana maneho fahendrena sy fahalalana. Mazava ho azy, ho fanampin'izany dia misy heviny hafa koa. Tokony hotadidinao fa mahafinaritra izany talisman manohitra ny maso ratsy. Ankoatr'izay dia mampita fahasalamana sy fanambinana ho antsika izy io. Raha ataontsika tombokavatsa ity tandindona ity dia antony iray hanomezana tanjaka sy finoana miaraka amin'izay. Ka ny amulet dia natao ho an'ny velona nefa koa, ho an'ny maty koa, mba hisorohana ny vatana tsy ho vaky.
Tandindon'ny maso ejiptiana
Mazava ho azy, ankehitriny rehefa fantatsika ny dikan'ny mason'ny tatoazy Horus, dia tsy maintsy fantarintsika hoe avy aiza ireo sariohatra ireo amin'ny alàlan'ny angano. Mampiseho ny Falcon God Horus. Very ny masony havanana tamin'ny ady. Ady izay tadiaviko hamaly faty ny fahafatesan'i Osiris rainy. Rehefa vita ny ady dia natodin'izy ireo tamin'i Horus na dia ny ampahany aza ny mason'izy ireo, saingy natolony an'ny rainy izy io ary norakofany bibilava ny tarehiny. Ka izao dia takatsika kely kokoa ny dikan'ny fiarovana sy ny lafiny masina.
Angano momba ny maso ejiptiana
Ao anatin'ny tandindona dia ilaina ihany koa ny manasongadina zavatra hafa noho izay lazain'ny angano. Zavatra iray izay mazava ho azy fa zava-dehibe raha ny fanaovana tatoazy miaraka amin'izany karazana tandindona. Fomba iray ahafahantsika mahatakatra izay miafina rehetra. Rehefa niverina ny mason'i Horus dia tapaka izany. Sombiny 6 fa samy manana ny heviny avy.
Ny ilany havia amin'ny maso: Mampiseho fofona ity ampahany ity.
Boriborin'ny maso: Ny faritra afovoan'ny maso, misy ny fanehoana azy eo amin'ny fahitana na ny fahitana.
Andalana ambony: Ny tsipika eo ambonin'ny boribory dia maneho eritreritra.
Ampahany tsara: Ny faritra banga amin'ny ilany ankavanan'ny maso dia hisolo tena ny sofina.
Tsipika miolakolaka: Ny antsipiriany tena ilaina iray hafa amin'ity karazana tandindona ity dia ny tsipika miolakolaka. Eny, io no ho iray maneho ny tsiro.
Tsipika mahitsy: Eo ambanin'ny maso fotsiny dia misy karazana tsipika hafa miavaka. Amin'ity tranga ity dia somary teritery kely kokoa noho ny teo aloha izy io. Ary eto dia mikasika izany ny mikasika.
Ho famaranana dia hampidirina ao amin'ny mason'i Horus ny fahatsapana rehetra. Izy io dia fitambaran'izy rehetra. Noho izany ny fahatsapana fiarovana mandroso bebe kokoa ao. Mitambatra dikany heviny fa miaraka amin'ny angano sy ny tantara maro fototra.
Volavola Eye of Horus
Ankehitriny rehefa fantatsika izay rehetra ilaintsika, dia mila mankafy fotsiny ilay isika endrika samihafa toy izany izay isany. Azonao atao ny mitazona ilay miseho amin'ny loko mainty sy amin'ny tsipika tsotra. Fomba marefo sy madinidinika mitondra tandindona be amin'ny hoditrao. Etsy ankilany, afaka misafidy maodely azo tanterahina bebe kokoa amin'ny endrik'olombelona ianao. Ny loko dia mety misy ihany koa amin'ny tatoazy toy ireny. Ary tsy mila mitafy endrika mitovy aminy foana izy ireo, na manaingo ny faritra mitovy amin'ny vatana. Sady soroka no nape na miverina Izy ireo dia mety ho toerana tonga lafatra, tsy manadino ny tanana na ny tongotra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » Karazana tombokavatsa » Tatoazy ara-pinoana » Tatoazy maso ejiptiana na ny mason'i Horus